सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणाबारे पौडेलसँग शशांक, शेखर र सिंहको विवाद - Mitho Khabar
September 2, 2021 mithokhabarLeaveaComment on सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणाबारे पौडेलसँग शशांक, शेखर र सिंहको विवाद
काठमाडौं । तत्काल महाधिवेशनमा उठ्ने सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने की नगर्ने भन्नेमा पौडेल पक्षमा विवाद भएको छ । नेता रामचन्द्र पौडेल तत्काल सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर जानुपर्ने र अरु नेताहरु डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहसहितका नेता जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि मात्रै उम्मेदवार तय गरेर जानुपर्ने अडानमा रहेका छन् । तर देउवालाई महाधिवेशनमा पराजित गरेर जान पनि अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्नुपर्ने अडान पौडेलले लिएका हुन् । ‘विवाद भन्दा पनि अहिले नै टिमको कम्तिमा पनि सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाँदा सहज हुन्छ । राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने उहाँको कुरा हो’ पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले भने, ‘अरु नेताहरुको केही समयपछि गरौं भन्ने कुरा आएको छ ।’ नेता पौडेलले मंगलबार आफ्नै निवासमा आयोजित छलफलमा वडा तहको अधिवेशन अघि नै कम्तिमा सभापतिको उम्मेदवार चयन गरेर सदस्यहरुलाई आफूहरु एक भएको सन्देश दिनुपर्ने बताएका थिए ।
तर, पौडेलको प्रस्तावलाई सिंह र कोइरालाद्वयले सिधै नकारेका थिए । ‘रामचन्द्र दाइको कुरा एकोहोरो आइरहेको छ । सभापतिको उम्मेदवार घोषणा आफूलाई नै गरेर गइहालौं भन्नेमा हुनुहुन्छ’ पूर्व संस्थापन निकट स्रोत भन्छ, ‘तर, यो कुरा शशांक, शेखर र प्रकाशमान कसैलाई चित्त बुझेको छैन । कम्तिमा जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि मात्रै उम्मेदवारी घोषणा गरेर जानुपर्नेमा उहाँहरु हुनुहुन्छ ।’ १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्दा पौडेलले जित्न नसकेको भन्दै पूर्व संस्थापनका नेताहरु प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइराला र शशांक कोइराला फेरि उनलाई उम्मेदवार बनाउने पक्षमा छैनन् । तर, पौडेल पनि सहजै छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् । आफ्नै निवासमा बसेको बैठका पौडेलले आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जानुपर्ने भन्दै सभापतिका अर्का दाबेदार डा. शेखर कोइरालालाई पदाधिकारीमा चुनाव लड्न आग्रह गरेका थिए । आफू सबैभन्दा सिनियर रहेको भन्दै पौडेलले सबैले साथ दिंदा आफूले जित्ने र सबैलाई मिलाएर लाने बताएका थिए ।
तर, अरु नेताले वडा तहको अधिवेशन अघि सभापति वा अरु पदको उम्मेदवारी घोषणामा रुची नदेखाएको स्रोत बताउँछ । अर्को पक्षले नमानेपछि पौडेलले सकेसम्म छिटो उम्मेदवारको सेट नै घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसै प्रयास स्वरुप पौडेलले डा. शेखरलाई पदाधिकारीमा महामन्त्री लड्न आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ । तर, शेखरले सभापतिभन्दा अर्को पदमा उम्मेदवारी नदिने बताउँदै आएका छन् । पौडेलले सभापतिमा आफैं उम्मेदवार बन्ने अडान लिएपछि सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अरु नेता असन्तुष्ट बनेका हुन् । यता पौडेल सहभागी हुने गरी ट्रेड युनियनको समन्वयमा काठमाडौंको बत्तिसपुतलीसहित अनुपम फुडल्याण्डमा छलफल राखिएको छ । सो छलफलमा पौडेल सहभागी हुनेछन् । तर, सिहं, कोइरालाद्वसहितका नेताहरु सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लागिसकेको छैन । कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइराला र डा. शेखर कोइराला सभापतिका प्रमुख दाबेदार हुन् । पूर्व संस्थापनबाटै कल्याण गुरुङले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछन् ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा यी बने तीनजना नयाँ मन्त्री पाेखरेललाई रुनु न हाँस्नु
पूर्व सांसद तथा गुल्मी कांग्रेसका पूर्व सभापति ज्ञवालीको निधन
February 18, 2020 mithokhabar